Driven — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဒီနေရာမှာငါ San Diego မှအတွက်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကတရားကိုဟောတဲ့တရားဒေသနာမှအချို့ video င်. ထိုကွန်ဖရင်၏ဆောင်ပုဒ် "မောင်းထုတ်ခဲ့သည်”, ဒါကြောင့်ငါကရောမအပေါ်ဟောပြောဖို့ရှေးခယျြခဲ့ 12:1-2. အဘယျသို့က "မောင်းထုတ်ခံရဖို့တစ်ဦးယုံကြည်သူသည်အတူပါဘူး?” အကြှနျုပျ၏အဓိကအချက်များကိုယုံကြည်စေခဲ့ကြ ...
1. ကရုဏာဖြင့် Driven ကိုခံရ
2. ကိုးကွယ်မှုမှ Driven ကိုခံရ
Nillapoet • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ever think about putting your sermons up asapodcast?
Janna Howard • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Trip Lee you are an anointed preacher, God definitely gave youagift. Praise God for our anointed and humble brother in Christ! Thank you for preaching and teaching the word. Your point on “Its not just me and Jesus we areafamily,” was just what i needed to hear. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Live out your gift brother, we are praying for you!
Steve Waters • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Yelowtail7 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … I will be revisiting the book of Romans.
Mika • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Jennifer Salas • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Jordwins Winslade • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Dria Elleohvee • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြေးဇူးတငျစကား, much love!!
Jade Mahouna • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
BRAVEHEART • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်